Origami yevana - Maitiro ekugadzira imbwa imbwa, nhanho nhanho | Mhizha On
Origami yeVana - Pepa Imbwa Nhanho nedanho
Irene Gil | | Crafts, Mapepa emhizha, Mhizha yevana, Crafts uye zvinhu
Mune izvi Tutorial ngatidzidzei maitiro origami inotarisirwa kuvana, kuitira kuti vatange nekukurumidza uye nyore mabasa. Izvi zvichaita kuti vadiki vatange kuwana kuravira kweiyi nzira yekutenda nekuwana yavo yekutanga mabasa pasina kuoma kukuru
Unyanzvi origami inosanganisira kugadzira mifananidzo ye paperi kuupeta zvakateedzana.
Kuita bepa imbwa zviri pachena kuti iwe uchazoda imwe bepa. Mune ino kesi, tichagadzira sei kumeso kwe Imbwa, zvingave zvakanaka kwazvo kana iri iyo vara raunoda imbwa. Chipande chinofanira kuva mativi mana akaenzana, uye saizi inoenderana nekukura kwaunoda imbwa yako.
Iwe zvakare uchada a mucherechedzo mutema kudhonza maziso nemhino.
Kuita bepa imbwa Tanga nekuisa jira nemakona kumusoro, pasi, uye kumativi. Ndokunge, muchimiro che rhombus. Vhura pepa pa hafu kubva kumusoro kuzasi uchijoinha makona uye kugadzira Triangle
Ngatiitei izvo nenzeve. Iwe unofanirwa kupeta makona emativi uye usiye iwo marefu pasi, sezvaungaona mumifananidzo inotevera
Chikamu chakapetwa chichava makona matatu izvo zvichagadzira nzeve dzembwa.
Ino yave nguva yekuita iyo mhino Zvembwa. Kuti uite izvi, peta iyo yepamusoro kubva pasi kumusoro, uchisiya hwaro hwakati sandara. Peta zvishoma zvishoma, saka haina kunyanya kukura kona.
Izvo zvinongoramba zviripo ne chiratidzo yevaravara dema iwe unodhonza mhino pamuromo pemuromo. Maziso ari pakati pechiso, anova maviri ovals kana maviri madenderedzwa.
Sezvauri kuona, zviri nyore kwazvo. Kubva ku 3 makore vana vanogona kugadzira imbwa dzavo kubva origami. Ivo havafanirwe kushandisa chigero kana chero chinhu chinopa njodzi kwavari. Zvakare, vape iwo mukana wekuti vasarudze ruvara rwebepa kuti vagokwanisa kuzviita nemavara avanoda zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Origami yeVana - Pepa Imbwa Nhanho nedanho
Kugadzira mhuka yakakamisirwa kunge katsi uye mutsago
Shongedza clip sekabhukumaki